ICasa DANTE ifumanisa i-Umbria!
Fornaci, Umbria, Italy
Ukuba ufuna ukuchitha iholide emnandi ufumanisa i-Umbria entle ukwindawo elungileyo!
Phambi kwelali enchanting of Torgiano, eyaziwa ngokuba imveliso iwayini ezibalaseleyo, imizuzu nje 3 ukusuka Deruta (City of Ceramics), 15 imizuzu ukusuka kumbindi Perugia, 28 imizuzu ukusuka Assisi and Todi, ungakwazi ukuphumla Casa Dante.
Ngenxa yendawo yayo enobuchule, iCasa Dante sisisombululo esihle kakhulu sokutshintshana uhambo olumangalisayo kwiilali zase-Umbrian, nokuba ziintsuku ezinesiqingatha, kunye namaxesha okuphumla achithwa kwindawo entle yokuqubha efumaneka kuzo zonke iindwendwe zethu ngexesha lasehlotyeni. Ukongeza kwi-tub ephambili, unokonwabela ixesha lokuphumla kwii-whirlpools ezimbini. Uzinikezele kwiincinci ezincinci uya kufumana ikona enesanti kunye nemidlalo. Ibha yepool ilungelelaniswe kakuhle kwisidlo sasemini kunye ne-aperitifs apho unokungcamla iipleyiti ezimnandi zeetshizi ze-Umbrian eziqhelekileyo kunye namanxeba abandayo. ICasa Dante ilungele kakhulu iintsapho ezinabantwana.
Ukulungelelaniswa kumanqanaba amabini, i-110 sqm yendlu yi-PRIVATE nangona ifumaneka ngaphakathi kwendawo yehotele enendawo yokutyela. Unokuthatha ithuba loqhagamshelo lwe-wi-fi yasimahla. Igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo liya kuba sezakho. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukupheka izitya ozithanda kakhulu, linesitovu segesi, i-oveni, isikhenkcisi semicrowave, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Omabini amagumbi okuhlambela aneshawa. Ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala uya kufumana kwakhona umatshini wokuhlamba. Amagumbi makhulu kwaye ngaphakathi kwigumbi eliphindwe kabini kuya kukwazi ukongeza ibhedi yesihlanu okanye, ukuba kuyimfuneko, ibhedi kunye / okanye i-camping cot ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Kumgangatho wokuqala unokuyonwabela, nangeentsuku ezinemvula okanye ezipholileyo, indawo entle yokuhlala kwi-terrace efakwe ngeglasi. Ukusuka kwigumbi lokulala elikhulu uya kuba nokufikelela kwi-terrace esetyenziswa njenge-solarium enezitulo zomgangatho.
Iqula liya kufumaneka de kube nge-06 Septemba 2020 kwaye liya kuvulwa kwakhona ngoMeyi ka-2021.
Siyakuvuyela ukukwamkela unyaka wonke ukuze sikwenze uphile amava amangalisayo abonelelwa yi-Umbrian territory.(Umbria jazz (Agasti 2020) -Eurochocolate (16-25 Okthobha) -Umnyhadala dei due mondi (ekupheleni kukaJuni-Julayi) vula zewayini (Meyi), Trasimeno Umculo Festival, le Gaite e Bevagna, Giostra della Quintana e Foligno (Juni) ematyeni Open (ngoNovemba) kunye nezinye iziganeko ukutya newayini ezininzi ihlelwe kwiilali ezininzi zokukhumbuza.
Indawo yeevenkile ikumgama weekhilomitha ezi-3.
Ngexesha lokuhlala kwakho ungaqhagamshelana nathi, kwaye ukuba unqwenela siya kukuvuyela ukucebisa iindawo kunye namava ukwenza ixesha lakho e-Umbria libe mnandi ngakumbi.